विश्वको सैन्य शक्तिमा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि, चीन र भारत कुन स्थानमा ?
HOME » विश्वको सैन्य शक्तिमा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि, चीन र भारत कुन स्थानमा ?
डिसी नेपाल , २७ फाल्गुन २०७४
बीबीसी। पहिला जस्तै अमेरिका सैन्य शक्तिका हिसावले पहिलो नम्बरमा रहेको छ। विश्व सुरक्षा फौजको शक्ति विश्लेषण गर्ने अनुसन्धान संस्था ग्लोबल फायर पावरले प्रकाशित सन् २०१७ को सैन्य सूचिमा अमेरिका पहिलो स्थानमा रहेको देखाएको छ।
१३३ देश सामेल रहेको सूचिमा अमेरिकापछि रुस दोस्रो स्थानमा परेकोछ। चीन तेस्रो र भारत चौथो स्थानमा पर्न सफल भएको छ। युद्ध हतियारको उपस्थिति र सशस्त्र शक्तिको बलमा भारत अमेरिका, रुस र चीनभन्दा पछाडि छ। जबकि फ्रान्स र बेलायत भारतभन्दा पछाडि छन्।
सेनाकालागि जुन सैन्य हतियारको विश्लेषण गरिएको छ, उसमा केवल पारम्परिक युद्ध हतियार उपकरणलाई सामेल गराइएको छ। यसमा परमाणु हतियारलाई सामेल गराइएको छैन।
पाकिस्तान १३ नम्बरमा
बीबीसीका अनुसार यो सूचिमा पाकिस्तान विश्वको १३ औं सबैभन्दा ठूलो सैन्य शक्ति भएको मुलुकमा रहन सफल भएको छ। रक्षा वलका विषयमा पाकिस्तानले विगत केही वर्षको तुलनामा २०१७ मा आफ्नो शक्तिलाई बढाएको छ। उसले १५ देशको सूचिमा ठाउँ पक्का गरेको छ।
अमेरिकाको रक्षा बजेट ५८७ अबर डलर थियो। जबकि चीनले १६१ अबर डलर रक्षा बजेट राखेको थियो। चीनका सक्रिय सैनिकको संख्या २२ लाख र रिजर्भ सैनिकको संख्या १४ लाख छ। चीनसँग तीन हजार लडाकू विमान र साँढे ६ हजार ट्याँक छन्।
यद्यपी चीन, अमेरिका र रुसभन्दापछि छ, तर, चीन निकै तीव्र रुपमा अगाडि आइरहेको छ। चीन चाँडै दोस्रो स्थानमा आउन सक्छ। चीनको रक्षा बजेट भारतको भन्दा तीन गुणा बढी छ। भारतको रक्षा बजेट ५१ अबर डलर थियो। ग्लोबल फायर पावरका अनुसार अमेरिकासँग १३ हजारभन्दा बढी जहाज छन्, जसमा लडाकु परिवहन र हेलिकाप्टर पनि सामेल छन्। चीनसँग करिव तीन हजार लडाकु जहाज छन्।
भारतसँग लडाकु जहाजको संख्या दुई हजारभन्दा धेरै छन्। सक्रिय सैनिकको संख्या १३ लाख भन्दा धेरै छ भने त्यस वाहेक २८ लाख रिजर्भ जवान पनि छन् जसले आवश्यकता अनुसार सेनालाई सहयोग गर्छन्। भारतमा सैन्य ट्यांकको संख्या करिव ४४०० सय छ। युद्ध पोतको संख्या तीन मात्र छ। तीमध्ये एकलाई समुन्द्रबाट हटाइएको छ।
यो सूचीका अनुसार पाकिस्तान विश्वको १३ औं शक्तिशाली मुलुक हो। पाकिस्तानको रक्षा बजेट सात अबर डलर छ र सक्रिय सैनिकको संख्या ६ लाख ३७ हजार छ। त्यसबाहेक कविर ३ लाख रिजर्भ सैनिक पनि पाकिस्तानसँग छन्।
हेलिकप्टर र ट्रान्सपोर्ट जहाजसमेत लडाकु जहाजको संख्या करिव १ हजार र ट्यांकको संख्या तीन हजारजति छ। पाकिस्तानसंग युद्ध पोत छैन तर, बेग्लै प्रकारको समुन्द्री जहाजको संख्या करिव २ सय छ। यो सूचिका अनुसार ८१ लाख जनसंख्या भएको इजराइल नौं स्थानमा छ। इजराइलसँग ६५० लडाकु विमान र अढाइ हजार भन्दा धेरै ट्यांक छन्।
एन्टिलियामा विवाह बन्धनमा बाँधिए इशा–आनन्द, यसरी भयो भारतको सबैभन्दा भव्य विवाह